Andro inona izany! | Martech Zone
Talata, Febroary 13, 2007 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Rehefa nivoaka ho any amin'ny fiarako maraina aho, dia natondraky ny tafio-dranomandry mahafinaritra avy hatrany. Alao an-tsaina ny orana, mangatsiaka fotsiny. Tsy maintsy novakiako ny akoron'ny ranomandry teo amin'ny fiarako (Ford 500) ary avy eo nanjana ny lanezy 10 santimetatra nianjera omaly alina. Tao an-trano ireo ankizy - nofoanana ny sekoly. Nataoko niasa tsy nisy olana be io (misaotra fa AWD).
Namakivaky ireo sakana 4 aho hiasa mamaky ny lanezy ary tena reraka be (eny, fantatro… mampihena ny lanjanao!). Any am-piasana, famolavolana bagel sy voankazo mahafinaritra no niandry ireo olona vitsivitsy sahy niditra tao. Teo amin'ny gorodona niaraka tamin'ny olona 30+ hafa, heveriko fa iray amin'ireo 6 tonga tany amin'ny birao aho. Mipetraka atsimon'ny Indianapolis aho ary nokapohina mafy ny Northside! Ary izao hariva izao dia misy famerimberenana:
Pic avy amin'i Maniry TV:
Tanàna tsara tarehy i Indianapolis rehefa milomano. Ny maritrano sy ny tsangambato dia toa tsy mampino rehefa mifikitra aminy tsara ny lanezy. Manantena aho fa afaka nandeha nitety kamerà androany… saingy misy ny asa tokony hatao.
Tena fanamby ny asa. Nandany ny tontolo andro tamin'ny Instant Messenger sy ny telefaona aho. Manana ekipa matihanina mirotsaka an-tsehatra izahay izay manomboka manangana hery amin'ny famotsorana amin'ny faran'ny taona ho avy. Ny tsy fananana ny hafa hamoaka hevitra sy ny fanehoan-kevitra momba izany dia nahatonga azy io ho sarotra ny hamokatra, ka nandevina ny tenako tamin'ny antontan-taratasy aho ary nanao prototyping vitsivitsy.
Somary nangina ny dia nody. Rehefa foana ny arabe dia nanapa-kevitra ny hitondra ny zanako lahy aho, Bill, mivoaka mba hahazo traikefa amin'ny fitondrana amin'ny lanezy. Nahita be dia be izahay miaraka amin'ny lanezy mihoatra ny iray metatra ary nasainy nanao donut aho, tsy nahavita fanaraha-maso intsony, nikorisa ary novonoina haingana ... gaga be izy tamin'ny fomba nitantanan'ny fiara azy (toa ahy)… freins antilock, traction fanaraha-maso, ary ny familiana kodiarana rehetra dia manome fifehezana bebe kokoa. Mahagaga. Nanao fanazaran-tena nandritra ny 30 minitra izy ary avy eo lasa izahay raha sendra nisy niantso ny polisy ary nieritreritra fa mikorontana.
Nijanona hisakafo hariva haingana izahay ary tonga tany an-trano ary nanomboka nilalao PHP vitsivitsy ary API an'ny Technorati. Ny sasany amin'ireo santionany kaody dia tsy nokasihina nandritra ny taona maro tao amin'ny tranonkalany (hint, hint). Miaraka amin'ny fikirakiran'ny PHP5 ny XML voajanahary, antenaiko fa hisy hanao fanavaozana tsy ho ela. Nanoratra kaody vitsivitsy aho fa tsy afaka nahazo valiny marina tamin'ny alàlan'ny PHP… ka sosotra aho izao ary miantso azy io alina. Tsy mino aho fa API misy azy ireo… Afaka manapaka sy mametaka ny fangatahako ao anaty tranokala tsy misy olana aho.
Ny antenaiko dia ny hanangana widget mahafinaritra izay manome ny mombamomba ny bilaogy… ny laharana, ny lahatsoratra farany, ny cloud tag, sns. Ho tonga any aho, fa alina no iantsoako azy. Miala tsiny fa tsy lahatsoratra mahasoa kokoa ity! Hiverina amin'ny làlana tsy ho ela aho!
Haka hatory kely aho amin'ny fitsangatsanganana rahampitso!
Fa maninona aho no mitoraka bilaogy?
Maty ve i dmoz?
14 Feb 2007 tamin'ny 4:39 maraina
Izaho dia nitady fampahalalana sasantsasany momba ny trackbacks (izany no nahitako ny tranonkalanao) fa tsy afaka mifehy aho, inona no hitako eto amin'ny sary! Niasa tsy lavitra an'i Richmond aho, ka toa mahagaga ahy izany lanezy rehetra izany! Oay! 🙂
14 Feb 2007 tamin'ny 8:17 maraina
Nahita ny zavatra ilainao tao amin'ny Trackbacks Maciek ve ianao? Nanao lahatsoratra aho Eto.
Misaotra nitsidika! Manana tafio-drivotra 'mitsoka' mahafinaritra isika anio saingy tokony hisava anio tolakandro.
14 Feb 2007 tamin'ny 11:05 maraina
Huh, eny hitako ny notadiaviko - misaotra. Azonao lazaina amiko ve hoe maninona ny WP no tsara kokoa noho ny Serendipity? Vao nanomboka ny weblog-ko aho fa mampiasa rindrambaiko Serendipity - fantatrao ve izany?
[Avy any Polonina aho, monina any Alemana ankehitriny - ho ahy dia tsy zava-mahagaga ireo tafio-drivotra ireo - saingy tsy dia fahita firy ny faritra misy anao - mankafy !!!]
14 Feb 2007 tamin'ny 11:36 maraina
Tsy mahazatra Serendipity, Tsy te-hisakana anao tsy hampiasa azy aho. Mpankafy WordPress aho noho ny fahafahako manamboatra azy io sy ny fisian'ny tranonkala ananany. Heveriko fa ny endrik'ilay rindrambaiko fitorahana bilaogy dia nanjary nihanahaja kokoa (ping, trackbacks, fanehoan-kevitra, blogroll, sns.), Ka raha tianao izany dia katsaho izany!
Lahatsoratra iray novakiako no nitana ny Serendipity tamim-pitandremana fatratra ary ny endri-javatra napetraka nifanaraka akaiky amin'ny WordPress, ka tsy azoko antoka fa tsara kokoa ny iray noho ilay iray hafa.